Calculator: maminavina ny fiantraikan'ny hevitrao amin'ny Internet amin'ny varotra | Martech Zone
Ity kajikajy ity dia manome fisondrotana na fihenan'ny varotra arakaraka ny isan'ny hevitra tsara, hevitra ratsy, ary hevitra voavaha izay ananan'orinasa amin'ny Internet.
Kajy ny fivarotana voambara mialoha misy fiatraikany amin'ny Internet
Raha mila fanazavana momba ny fomba namolavolana ny raikipohy, vakio eto ambany:
Formula ho an'ny fivarotana efa voambara mialoha amin'ny Internet Review
Trustpilot dia Sehatra fanaraha-maso an-tserasera B2B momba ny fakana sy hizarana ny hevitry ny daholobe ho an'ny daholobe. Hitan'ny Trustpilot fa ny fitsapana ataon'ireo mpanjifany dia mampiseho an fampiakarana ny tahan'ny fiovam-po hatramin'ny 60%. Raha ny marina, amin'ny alàlan'ny famakafakana mpanjifa 2,000 mahery, dia nanana matematika izy ireo namolavola ny paikady tena izy hanisana ny fisondrotan'ny varotra mety misy ifandraisany amin'ny hevitra tsara, hevitra ratsy, ary hevitra ratsy izay namboarina.
Trustpilot dia te-hanadihady ny fiantraikan'ny tsikera tamin'ny varotra, ka niara-niasa tamina olo-malaza izy ireo Mpahay matematika ao amin'ny Oniversiten'i Cambridge, William Hartston, hamolavola raikipohy hikajiana ny fiatraikany ara-toekarena amin'ny tsikera an-tserasera amin'ny orinasan'i UK. Toy izao manaraka izao ny rijan-teny:
V = Fisondrotana isan-jato amin'ny fidiram-bolan'ny orinasao noho ny fanamarihana an-tserasera
P = Ny isan'ny hevitra tsara
N = Ny isan'ny hevitra ratsy
R = Ny isan'ny fanamarihana ratsy nalamina tamin'ny fomba nahafa-po
Ity misy horonantsary topimaso miresaka momba ny tombotsoan'ny tsikera an-tserasera:
Fahatokisana ny mpanjifa dia ampahany tena ilaina amin'ny drafitra marketing rehetra, saingy tsy misy ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpampiasa farany zarainao amin'ny Internet mba hahafahan'ireo prospect manao fikarohana sy mifandray mivantana amin'ny mpanjifa, tsy feno ny drafitry ny fahatokian'ny mpanjifanao. Ny fampiasana sehatra hametrahana automatique ny fanangonana, ny syndication ary ny fampiroboroboana ny hevitry ny mpanjifa dia zava-dehibe amin'ny orinasa mivarotra amin'ny Internet.
Fotoana tokony hampijanonan'ny marika ny tahotra ny hevitra amin'ny Internet ary hanomboka hahatakatra ny herin'ny valin'ny hevitry ny mpanjifa. Ny tsikera an-tserasera dia mahatonga ny mpanjifa hahatsapa ho ankasitrahana sy heno, ary ny orinasa mahita ny tsy fitoviana azo tsapain-tanana sy miharihary amin'ny ROI, fidiram-bola, fitazonana ny mpanjifa ary ny tahan'ny click-through. Raha mbola tsy nanao an'io ny orinasanao dia izao no fotoana.
Jan Vels Jensen, CMO an'ny Trustpilot
Manatsara ny fifamoivoizana, ny varotra, ny haben'ny sarety ary mampihena ny fandaozana ny sarety ny tsikera an-tserasera.
Ampidino ny anjara asan'ny mpitsikera amin'ny Internet Trust
Tags: fanaovana kajympanjifa tsy mivadikavarotra fahatokisana ny mpanjifafitazonana ny mpanjifaCustomer reviewsmampitombo ny varotra an-tseraseraonline calculatorfanangonana famerenana an-tseraserasehatra famerenana an-tseraseraFanamarihana an-tseraseraharona fiantsenanatrustpilot
Mar 30, 2021 ao amin'ny 2: PM PM
Ny matematika eto dia toa tsy misy dikany. Ny ohatra ao amin'ny horonan-tsary dia manome hevitra 120 miabo, 20 miiba, ary 10 mivaly. Raha mametraka ireo isa ireo amin'ny formula ambony aho dia mahazo 572.75 fa tsy 62.41% araka ny aseho amin'ny horonan-tsary.
Mar 31, 2021 amin'ny 11: 10 AM
Marina ny anao, mila manavao ity lahatsoratra ity aho. Raha ny tena izy dia V = 7.9 (.62P -.17N² + .15R).
5 Jiona 2021 à 5:40
OwO, lahatsoratra tena mahaliana. Tsy nieritreritra mihitsy hoe misy kajy maminavina ny varotra amin'ny tsikera an-tserasera. Misaotra ny fizarana. Kajy aho ary ny isako dia: 1620.53%. Ahoana ny hevitrao momba ny naotin'ny varotra?
Jun 9, 2021 ao amin'ny 4: 13 PM
Oay! Mety ho fitsambikinana izany ary arahaba soa noho ny fanamarihanao.